Digital Water Works, Inc. waxay maalgashi istiraatiiji ah ka heshaa Bentley Systems - Geofumadas
Digital Water Works, Inc. waxay maalgelin ka heshaa Bentley Systems
Maarso, 2019 Engineering, Microstation-Bentley
Maalgashiga cusub ayaa kordhin doona joogitaanka caalamiga ah ee labada shirkadood ee kaabayaasha biyaha iyo nadaafadda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay
Denver, Colorado (Mareykanka), Maarso 1 ee 2019 - Digital Water Works, hogaamiyaha dunida oo dhan ee mataanaha digital kaabayaasha biyaha caaqil, ayaa maanta ku dhawaaqay maal istiraatiiji ah ee shirkadda by Systems Bentley. maalgashiga Tani waxay u ogolaaneysaa Digital Water Works iyo Bentley kordhiyo hogaanka iyadoo la siinayo xal fiican mataanaha digital shirkadaha kaabayaasha biyaha iyo fayadhawrka ee degmada iyo kuwa gaarka ah - xal oo leh awooda in la kordhiyo aragti hawl, kor u qaadista heerka, tayadoodii kharashka raasumaalka oo yaree wadarta qiimaha lahaanshaha ee dhismahaaga biyaha.
Digital istaraatijiyad Water Works waxaa fulinaya u gaar ah ku dhisan software ugu wanaagsan ee ganacsiga qaybinta guud (Sariirta ilmaha) sidii codsiyada iTwin Systems Bentley Openflows iyo adeegyada, Bentley hoos liisanka si toos ah siiyo macaamiisha ee Digital Works Water. Isbahaysiga barnaamijka ma aha mid gaar ah; Digital Water Works sii wadi doonaan in la iibiya software sare iyo la talinta technology ganacsiga iyo injineernimada shaqeeyaan si ay u siiyaan waaxda adeega biyaha si fiican. Sidaas darteed of maalgelinta, Bentley xaq u yeelan doontaa in uu magacaabo laba xubnood oo guddiga ka mid ah Digital Works Water.
Thanks in ay aqoon qoto dheer oo warshadaha, awoodaha ay heer caalami iyo technology advanced, Digital Water Works waxa si gaar ah u taagan si ay u caawiyaan adeegyada shirkadaha biyaha iyo fayadhawrka fuliyo madal kaabayaasha ah oo mataano ah digital geospatial scalable , rogrogmi karo oo dhan oo ku saleysan shuruudaha warshadaha iyo COTS software. Tani madal geospatial kacaan ogolaanaya yutiilitida kaga shaqeysiiso kuna dayactirto kaabayaasha biyaha adkeeysi badan, iyadoo la sii waafaqsan, la kulmo heerarka adeeg at qiimaha ugu hooseeya tirada guud ee wareegga nolosha iyo in la kordhiyo qancinta macaamiisha.
Isku sirdoonka-waqtiga dhabta ah la Analytics da'ayeen, mataano digital ogolaan nidaamka jilidda guud, qaybinta biyaha iyo ururinta biyaha daata la muuqaalaynta immersive iyo aragti gorfaynta ee natiijada taageero go'aanka xakamaynta waxqabadka hawl- iyo wax-ku-oolnimada wax-ku-oolnimada, oo ay ku kacday sirdoon farsamo. mataano Digital sidoo kale u oggolaadaan in aad si ay u maareeyaan shaqada iyo hantida (labada dhowreen iyo toosan), dayactirka diiradda on falanqaynta sugnaanta sababaha iyo qaab saboolka ah, iyo sidoo kale meertada maamulka istiraatiijiga ah ee hantida ku salaysan khatarta in ay tayadoodii kharashka meertada nolosha, la kordhiyo nolosha ah ee kaabayaasha iyo mudnaanta, maareeyaan iyo hirgalinta mashaariicda horumarinta magaalada.
"Waxaan ku faraxsanahay iyo sharaf ay u helaan maal istiraatiiji this Bentley," ayuu yiri aasaasaha iyo agaasimaha Digital Water Works, Paul F. Boulos, Doctor, BCEEM, Hon.D.WRE, Dist.D.NE, Dist.M.ASCE , NAE. "Joogitaankooda caalami ah oo hoggaanka qaybaha wax soo saarka mataano kaabayaasha digital tamarta, saliida iyo gaaska, gaadiidka iyo macdanta waa mid aad u muhiim ah, iyo wada shaqaynta, waayo-aragnimo iyo xalalka ballaaran ay gaadhnay noqon doontaa lacagta weyn in shirkadaha biyaha iyo waxay bixin doonaan qiimaha aan macquul ahayn ee macaamiisheena. "
Boulos sheegay in taxanaha ah ee alaabta digital kaabayaasha Mataano soo giringiriyey soo baxay weji ka badan shan iyo toban bilood ee soo socda, iyo in "bisha soo socota, waxaan bilaabaysa barnaamij horseedka waayo, korontada oo biyo ah oo daata iyo shirkadaha injineernimada kuwaas oo raba in ay ka qaybqaataan qorshaha naqshadeynta badeecada kadibna ay sameeyaan imtixaanka software ee beta ".
Agaasimaha Guud ee Systems Bentley, Greg Bentley ayaa sheegay, "maalgashiga ee Systems Bentley ee Digital Works Water ka dhigan tahay aqoonsiga in takhasusay 'noqoshada digital" Ciddu la ciyaari doonta door muhiim ah caawinta dadka guryaha kaabayaasha Ka faa iidaysan kartida maskaxda laba-geesoodka ah. Waxaan aaminsan nahay software Qaabaynta iyo adeegyada Openflows madaxda warshadaha iTwin xoojin karo horumarka biilasha biyaha iyo digitization daata. Laakiin waxaan rumaysan nahay xataa ka badan si adag in hab furan, oo ay taageerayaan ku integrator madax bannaan oo xoojiyo code furan xal deegaanka our aan horay loo arag, waxaad ka heli kartaa faa'iidooyinka ugu badan ee adeeg kasta oo dardar-qalooca waxbarasho qof walba ah.
"Oo siiyey record track of horumarka digital for korontada biyaha kaabayaasha in dunida ay, waxaa ay noqon kartaa mar dambe wax ku ool ah ka badan Dr. Paul Boulos markii keentay injineerada iyo shirkadaha injineernimada, iyada oo Digital Biyaha shaqeeyaa in ay ka faa'idaystaan ​​fursadaha aan xad lahayn haatan u furan in ay mataano digital. "
Bentley leedahay in ka badan 3.500 shaqaalaha, abuuraa badan 700 milyan oo dakhli sannadle ah dalalka 170 oo ka 2012, ayaa maal badan 1.000 million ee cilmi, horumarka iyo qaniimooyin. Tan iyo markii la aasaasay ee 1984, shirkadda ayaa ku hadhay gacmaha shan Aasaasayaasha ay, walaalaha Bentley. Shirkadaha Bentley waxay ku shaqeeyaan martiqaad ku saabsan suuqa gaarka ah ee NASDAQ; Isbahaysiga istaraatiijiga ah ee Siemens AG waxa uu ururiyay saamiyo tiro yar oo aan lahayn xuquuqda codbixinta. Www.bentley.com
Ku saabsan Shaqooyinka Biyaha Dijital ah
Digital Water Works waa nooc cusub oo xal technology bixiyaha u go'ay si gaar ah innovate for warshadaha ee biyaha caalamiga ah iyo biyaha daata. Shirkadda istaraatiiji ah isku daraa xoogga Kombuyuutarada daruur, sirdoonka macmal, dareemayaal IoT, injineernimada guud jilitaanka iyo Analytics sare si ay u dhisaan oo loo hawlgeliyo aan xal dhib mataano digital dhamaystiran oo lagu kalsoonaan karo, waayo, kaabayaasha biyaha noqonee, ka badan waarta iyo kabid badan. Natiijadu waxay tahay fikrado ku filan iyo fulin karo in awood biilasha biyaha iyo biyaha daata si ay tayadoodii iyo beddesho ganacsigooda iyo sii wadida hawlaha ay kaabayaasha muddo dheer kharashka ugu hooseeya ee wareegga nolosha. La aasaasay 2018 by Paul F. Boulos, shirkadda ku salaysan Denver leeyahay taageerada, oo loox ka mid ah agaasimayaasha iyo guddiga la-talin oo ka kooban khubaro ku technology, maamulka iyo dadaalka badan taasoo keentay in injineernimada warshadaha biyaha. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.digital-ww.com ama ku xiro Nidaamka Biyaha Biyaha Twitter y LinkedIn.
Shaqooyinka Biyaha Dijital ah
Agaasimaha, Isgaarsiinta Shirkadda
Post Previous" Hore Golaha Dunida Dunida - 2019
Post Next Jawi isku dhafan - Xalka ay Geo-Engineering u baahan tahayNext »